Who’s the murderer Ep-16 - YTV
Home » Daily Show » Who’s the murderer Ep-16
Who’s the murderer Ep-16
Daily Show, Programs October 24, 2020 12:15 am
? YTV Channel ပရိသတ်တွေထဲမှာ စုံထောက်ပညာဝါသနာပါသူတွေများ ရှိကြပါသလား?… ?
?‍♂ တကယ်လို့များ စုံထောက်ပညာဝါသနာပါတယ်. မှုခင်းတစ်ခုမှာ တရားခံဘယ်သူလဲဆိုတာကို စူးစမ်းကြည့်ချင်မိတယ် ဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ Who’s the murderer Variety Show ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်မှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဉာဏ်စမ်းကြည့်ရှုနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်…
?? ဒီအစီအစဉ်မှာ ပြိုင်ပွဲဝင်သရုပ်ဆောင်တွေဟာ တရားခံတွေအဖြစ် သံသယဝင်ခံရမှာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေက စုံထောက်တွေနဲ့အတူ လူသတ်တရားခံဘယ်သူလဲဆိုတာကို ပါဝင်ဉာဏ်စမ်းဖို့ “Who’s the murderer” အစီအစဉ်ကို ၁၁-၇-၂၀၂၀ (စနေနေ့) မှစတင်ပြီး YTV Free to Air Channel မှတင်ဆက်ပြသပေးသွားတော့မှာပါ…ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်အားလုံးကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ…
? ပြသမည့်ရက် : အပတ်စဉ် (စနေ) နေ့တိုင်း
? ပြန်လည် ပြသမည့်ရက် : အပတ်စဉ် (ဗုဒ္ဓဟူး) နေ့တိုင်း